ဂျူးစာအုပ်များ | Weenyinthit Bookshelf
လူအကျြုိက်အများဆုံး စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျုးရဲ့ ၀တ္ထုလေးတွေပါ။
ဂျူး – ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့ ဂျူး – လရဲ့အောက်ဖက်မိုင်အဝေးမှာ ဂျူး – ကံကြမာကိုမယုံကြသူများ
ဂျူး – ကျွန်မ၏သစ်ပင် (06/30) ဂျူး -ကြယ်ကြွေတို့အတောင်ပံ (06/30)
17 Responses to “ဂျူးစာအုပ်များ”
aungpainghyo says:	June 20, 2010 at 10:13 am	စာတွေရေးပေးနေတဲ့ ဆရာမ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	moe sat says:	September 14, 2010 at 2:30 am	ဂျူးရဲ့ ”စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး”လေးလည်းတင်ပေးပါဦး
Reply	susu says:	October 15, 2010 at 4:16 pm	ဂျူးရဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတိုင်းမျက်ရည်ရပါတယ် ဖတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုမျောပါသွားလို့ပါ
ဆရာမရဲ့ မောင် ရှိရင်တင်ပေးပါလားဟင် အရမ်းဖတ်ချင်ပါတယ်
Reply	khin su says:	October 31, 2010 at 2:42 am	” ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကား ” ဖတ်ချင်ပါတယ်… တင်ပေးကြပါနော်..
Reply	chit says:	April 8, 2011 at 5:29 am	စာရေးဆရာမ-ဂျူး ရဲ့ စာတွေကို အစဉ်အားပေးနေမယ့် စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ။ဆရာမရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ တွေကို နှစ်သက်ပါတယ်။ဆရာမရဲ့ နုးညံ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့ နောက်ထပ်ပေါက်ဖွားလာမဲ့ အချစ်အကြောင်းစာအုပ် များကို မျှော်လင့်လျှက်…………..
Reply	Ju Jue says:	April 19, 2011 at 5:15 am	ဂျူးရဲ့..”သူမင်းကိုဘယ်တော့မှ”ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်…ဘယ် site မှာမှ ရှာမတွေ့လို့ပါ..
Reply	Ju Jue says:	April 19, 2011 at 5:16 am	”သူမင်းကိုဘယ်တော့မှ”ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်…ဘယ် site မှာမှ ရှာမတွေ့လို့ပါ..
Reply	angel says:	June 11, 2011 at 11:51 pm	ဂျူးရဲ့ အမှတ်တရ တင်ပေးပါဦးနော်။
Reply	Htoo Myat Nandar says:	June 14, 2011 at 4:34 am	Hi, can u please the latest released novel of Juu?
Htoo Myat Nandar
Reply	jul says:	July 23, 2011 at 10:29 am	( ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကား ) , please.
Reply	ွှ့Thant Zaw Aung says:	October 1, 2011 at 6:05 am	http://www.sagarwarmyae.info ဆိုတဲ့ website မှာ ဆရာမဂျူးရဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများကို download ဆွဲလို့ရပါတယ်..အခုတောင်းထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေ အကုန်ရှိပါတယ်..သွားကြည့်လိုက်ပါဦး..
Reply	Hinn Thar Oo says:	December 26, 2011 at 1:14 am	ဆရာမ ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဟာ ကျွန်မအကြောင်းကိုရေးထားသလိုပါဘဲ
Reply	မြတ် says:	July 15, 2012 at 11:50 pm	ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကား တင်ပေးပါဦးနော်..
Reply	တာရာ says:	November 14, 2012 at 10:54 pm	ဂျူးရဲ့ ကြာတော့သည်လည်းမောင့်စကား ကိုလည်းတင်ပေးပါဦး
Reply	kotheinzaw says:	May 7, 2013 at 4:46 am	မျှော်လင့်ချက်နှင့်အခြားဆောင်းပါးများစာအုပ်ဘယ်လိုရနိုင်ပါလဲ
Reply	kotheinzaw says:	May 7, 2013 at 4:53 am	စာအုပ်များနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်စီပြန်ထွက်ပေူစေချင်ပါတယ်။
Reply	soehtetlin says:	May 16, 2013 at 6:21 am	ဟုတ်ကဲ့ကျနော်လည်း အားပေးနေပါတယ်